“Ma fileyn in la fariisin doono Joe Hart oo aniga la igu soo bilaabi doono.”. Goolhaye Willy Caballero – Gool FM
“Ma fileyn in la fariisin doono Joe Hart oo aniga la igu soo bilaabi doono.”. Goolhaye Willy Caballero
Byare August 13, 2016
(Manchester)13 Agoosto 2016. Goolhaye Willy Caballero ayaa qiray ina lama filaan ku noqotay in isaga laga doortay goolhaye Joe Hart iyadoo lagu soo bilaabay kulanka Man City ay 2-1 uga adkaatay Sunderland ciyaartoodii furitaanka Premier League ee xilli ciyaareedka cusub.
Caballero ayaa si cajiib ah fursad uga bad-baadiyay Jermain Defoe qeybtii hore ka hor inta uusan isla laacibka gool caaqibo leh ka dhalin ciyaarta oo ka harsan 19-daqiiqo.
Laakiin Jesus Navas oo badel ku yimid ayaa furtay Man City kaddib gees laad kulul uu soo qaaday ayaa waxaa iska dhaliyay Paddy McNair ciyaarta oo ay ka harsan tahay saddex daqiiqo.
“Lama filaan ayay igu ahayd, si fiican ayaan u tababaranayay kulamadii la isugu diyaarinayay xilli ciyaareedka cusub si aan u helo fursadan, waxaan isku dayay inaan maanta ku raaxeysto fursadaas,”. Goolhaye Caballero ayaa sidaa ku waramay.
“Nasiib wanaag si fiican ayaan saddex dhibcood ugu bilaabanay, way fiican tahay inaan is hor marino aana sameyno is sixid markaan guuleysano.”.
Thierry Henry oo muujiyay inuu jecelyahay in Mahrez uu ku biiro Arsenal
MUUQAAL + SAWIRRO: Xulka qaranka Nigeria oo iska xaadiriyey afar dhammaadka ciyaaraha Olombikada, markii ay ka tallaabsadeen Denmark.... (Xulkee la ciyaari doonaan Super Eagles?)